तौल घटाउ ल्वाङको प्रयोग गरौं – Khabar PatrikaNp
तौल घटाउ ल्वाङको प्रयोग गरौं
विराटनगर, ८ भदौ । ल्वाङ, एक साधारण मसला हो, जुन सजिलै प्रत्येक भान्छामा पाउन सकिन्छ ।
ल्वाङको अनौंठो स्वाद र गन्धका कारण, यसलाई धेरै खानेकुरामा पनि प्रयोग गरिन्छ । ल्वाङलाई लगभग दैनिक सेवन गरिने हुँदा यसका फाइदाको बारेमा धेरैलाई थाहा भए पनि ल्वाङले शरीरको अनावश्यक बोसो जलाउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरा धेरै कमलाई थाहा होला ।
युएसडीए नेशनल न्यूट्रिन्ट डाटाबेसका अनुसार, ल्वाङमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फाइबर भिटामिन ई, भिटामिन सी, फोलेट, राइबोफ्लेविन, भिटामिन ए, थायामिन र भिटामिन केसहित धेरै पौष्टिक तत्वहरू छन् । ल्वाङको सेवनले मेटाबोलिज्मलाई सक्रिय पार्छ, जसले तौल घटाउन मद्दत गर्छ ।
ल्वाङमा एन्टिकोलेस्टेरेमिक र एन्टि–लिपिड गुणहरू हुन्छन् । ल्वाङलाई मरिच, दालचिनी र जिराको साथ मिसाएर खाँदा मेटाबोलिक दर बढाउन मद्दत गर्छ, जसले अन्ततः शरीरको तौललाई घटाउन मद्दत गर्छ । यसबाहेक, ल्वाङमा हुने एन्टीआक्सिडन्टले तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ ।
कम तनावले पुरानो रोगको जोखिमलाई घटाउनुका साथै रगतमा चिनी नियन्त्रण गर्छ । तौल घटाउनका लागि ५० ग्राम ल्वाङ, ५० ग्राम दालचिनी र ५० ग्राम जिरालाई भुटेर, पिसेर पाउडर बनाउनुहोस् । उक्त पाउडरलाइ हावा नछिर्ने जारमा भण्डार गरेर राख्नुहोस् । मिश्रणको एक चम्चालाई एक गिलास पानीमा उमाल्नुहोस् र चिसो भएपछि एक चम्चा मह राखेर हरेक बिहान खाली पेटमा पिउने गर्नुहोस् ।
मसलाले एलर्जी हुनेहरूका लागि यो तरिकालाई तौल घटाउन प्रयोग गर्नुअघि डाक्टरको सल्लाह लिनु पर्छ । कुनै पनि तरिकाले एक्लैले तौल घटाउन मद्दत गर्न सक्दैन । त्यसैले नियमित व्यायाम, स्वस्थ खानाको सेवन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
Prevछाब्दी बाराही देवीसँग भाकल मागेमा मनोकांक्षा पूरा हुने प्रसिद्ध धार्मिकस्थल
Nextकर्णालीमा चिकित्सकसहित ६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण…..!
खुसिको खबर – NCELL ले पनि ल्यायो अहिलेसम्मकै सस्तो डाटा प्याक !
अभिनेता सुशान्तकी पूर्वप्रेमिका रियाले सुशान्तका विषयमा मुख खोलिन्– उनी…